योजनाको सम्पूर्ण इकाइ विक्री हुनेमा ढुक्क छौं | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता योजनाको सम्पूर्ण इकाइ विक्री हुनेमा ढुक्क छौं
on: May 23, 2019 अन्तरवार्ता
योजनाको सम्पूर्ण इकाइ विक्री हुनेमा ढुक्क छौं
नवराज गिरी, कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड
हिमालयन बैंकमा विभिन्न विभाग तथा शाखा प्रमुख भएर २२ वर्ष कार्य गरेका नवराज गिरी सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडमा गत पुसदेखि नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा प्रवेश गरी वैशाख २०७६ देखि कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । गिरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०४९ सालमा एमबीए गरेका हुन् । प्रस्तुत छ, कम्पनीले आफै कोष व्यवस्थापकको रूपमा रहेर २०७६ जेठ ९ देखि जारी गर्न लागेको सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड–२ योजना तथा पूँजी बजारसम्बन्धी अन्य विषयमा गिरीस“ग आर्थिक अभियानकी सुप्रिम तिवारीले गरेको कुराकानीको सार :
सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले कस्ता कार्य गरिरहेको छ ? साथै के कस्ता योजना छन् ?
सीबीआईएल क्यापिटलले हाल निष्कासन प्रबन्धक, शेयर रजिस्ट्रार, निक्षेप सदस्य, निष्कासन प्रत्याभूति जस्ता मर्चेन्ट बैंकिङ सम्बन्धी सेवाका साथै लगानी व्यवस्थापक तथा सिटिजन्स म्युचुअल फन्डको कोष व्यवस्थापकको रूपमा काम गरिरहेको छ । साथै संस्थागत परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिइसकेको छ ।
दोस्रो म्युचुअल फन्ड ल्याउँदै हुनुहुन्छ । यसका के कस्ता विशेषता छन् ?
कम्पनीले कोष व्यवस्थापकको रूपमा विगत १४ महीनादेखि कार्य गरिरहेको छ । हामीले व्यवस्थापन गरिरहेको सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड–१ को वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रू. ११ दशमलव ५७ छ । यसले कोषको वार्षिक वृद्धि १५ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । बजारको विगत १ वर्षको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने हामी इकाइधनीहरूको अपेक्षामा खरो उत्रन सफल भएका छौं । यसैबाट प्राप्त हौसलाले हामीलाई सीएमएफ २ लगानीकर्ताका माझ ल्याउन मद्दत मिलेको छ । सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड–२ पनि हाम्रो पहिलो म्युचुअल फन्डजस्तै बन्दमुखी योजना हो । यसको आकार रू. १ अर्ब रहेको छ । यस योजनाको ६० प्रतिशत सूचीकृत धितोपत्र, ३० प्रतिशत स्थिर आय हुने क्षेत्र र बाँकी १० प्रतिशत रकम नगद निक्षेप राखिने गरी प्रक्षेपण गरिएको छ । यसको निष्कासन २०७६ जेठ ९ देखि २०७६ जेठ १३ गतेसम्म हुनेछ ।
यो पनि बन्दमुखी योजना हुने रहेछ । खुलामुखी योजना ल्याउने पनि सोच छ ?
अहिले हाम्रो प्राथमिकता सीएमएफ २ नै हो । यसको निष्कासन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि हामी सर्वसाधारणमाझ खुलामुखी योजना पनि ल्याउनेबारे सोचिरहेका छौं ।
शेयर बजार घट्यो भने लगानीकर्ताले म्युचुअल फन्डबाट भए पनि राहत पुग्ने अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । तर शेयर बजार घट्दा म्युचुअल फन्डको आय पनि घट्ने र शेयर बजार बढ्दा बढ्ने भएपछि लगानीकर्तालाई यसबाट के फाइदा हुन्छ ?
नेपालमा म्युचुअल फन्डप्रति अझै सचेतना बढाउन जरुरी देखिन्छ । सबैभन्दा पहिला सामूहिक लगानी कोष किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । एउटा लगानीकर्ताको सबैभन्दा सानो लगानी क्षमता भनेको १ हजार रुपैयाँ हो । सो रकमले लगानीकर्ताले प्राथमिक बजारमा १० शेयर किन्नेबाहेक अन्य कुनै लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यसरी त्यो सबै रकम एउटा कम्पनीमा लगानी हुन्छ ।
तर त्यति नै रकम म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा उनीहरूको हातमा एउटा ठूलो विविधीकृत लगानीको हिस्सा आउँछ । म्युचुअल फन्डमा बजारको जोखिम नहुने भन्ने होइन । तर बजारमा सीधै लगानी गर्दा जोखिम व्यवस्थापनको कार्य गर्ने दक्ष जनशक्तिमा लगानीकर्ताको पहुँच हुँदैन भने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा उनीहरूलाई सो सुविधा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त भइरहेको हुन्छ । त्यसबाहेक म्युचुअल फन्डले लगानीकर्ताको केन्द्रीकृत जोखिम समेत न्यूनीकरण गर्ने हुँदा म्युचुअल फन्ड लगानीकर्ताका लागि उत्तम लगानीको साधन हो ।
हाल शेयर बजारमा म्युचुअल फन्डप्रति लगानीकर्ता खासै आकर्षित देखिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सीएमएफ २ को सम्पूर्ण इकाइ विक्री हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हामीले पहिलो म्युचुअल फन्ड सीएमएफ १ मा गरेको हालसम्मको प्रगति नै हाम्रो विश्वासको आधार हो । हामी ढुक्क छौं कि, लगानीकर्ताले हामीलाई विश्वास गरेर उत्साहजनक रूपमा इकाइ खरीद आवेदन भर्नेछन् ।
अहिले सबै म्युचुअल फन्डहरूले शेयर बजारमै मात्र लगानी गरिरहेछन् । लगानीको दायरा बढाउन कस्तो नीतिगत व्यवस्था चाहनुहुन्छ ?
बन्दमुखी योजनाको निश्चित समयावधि हुने भएकाले दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्रमा जान त सम्भव नहोला । तर नियामक निकायले सामूहिक लगानीका नयाँ प्रकारका लगानीका साधन विकास गरेर भविष्यमा वैकल्पिक लगानीका क्षेत्रमा काम गर्न सकिनेगरी कार्य गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसका लागि हामी मर्चेन्ट बैंकरबाट उहाँहरूलाई चाहिने सल्लाह, सुझाव र सहयोगका लागि सदैव तत्पर छौं ।
११ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर खर्च गर्ने पक्षमा सरकार छैन : मन्त्री आङ्बो
रानी–किमाथांका ६ लेन सडक विस्तारमा ढिलाई, सडकको बीचभागमै हाइटेन्शन पोल
प्रदेश नम्बर ५ मा लगानीकर्ता फोरम, केन्द्रसम्म लगानीकर्ताको माग पुर्‍याउने उद्देश्य
नेप्सेको नयाँ वेबसाइट बिटा भर्जनमा
१० महीनामा रू.५५ अर्बको शेयर सूचीकृत
महाभारत क्षेत्रको लोक्ता खेर जाँदै
नेप्सेमा चार कम्पनीको हकप्रद र बोनस शेयर सूचिकृत
तस्वीर : पानी बगने नहर बाख्रा चरन बनेपछि……
५.९० अंकले बढ्दा नेप्से १२६४.३६ विन्दुमा, कम मूल्य पर्ने शेयर लगानीकर्ताहरुको रोजाइमा
पारमाणविक तथा रेडियाधर्मी पदार्थ सम्बन्धी विधेयक : भट्टी सञ्चालन राज्यकै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ